Raspberry Pi 4 Muenzaniso B: izvo zvitsva maficha | Linux Vakapindwa muropa
Raspberry Pi ine toy nyowani yekutengesa. Zvayo ndezve mhando nyowani Raspberry Pi 4 Muenzaniso B iyo yakauya nekushamisika, sezvo kuvhurwa uku kwanga kusingatarisirwe. Zvaitaridzika kuti nhau dzaizouya dze2020, asi ivo vafambira mberi Iyi SBC (Imwe Bhodhi Komputa) bhodhi rave rakabudirira kwazvo uye kwete netsaona. Pamutengo wepakati pe € 30 iwe une komputa yakapusa yekushandisa yakawanda yemapurojekiti.
Izvo zvakachinja Raspi kuita chikwangwani chekubudirira pakati pevanoda DIY-vanofarira uye zvakare muchikamu chedzidzo, kubvira nekuda kwezvakanaka zvinyorwa uye huwandu hwedzidziso huripo, chazove chishandiso chakanaka chekudzidza pamutengo unodhura kwazvo wezvikoro nenzvimbo dzekudzidzisa. Mushure memwedzi tisina kuwana chero gadziriso, isu tave neiyi nyowani Rapsberry Pi 4. Unoda kuziva kuti chii chitsva?
Iyo nyowani Raspberry Pi 4 Model B ine yakanyanya kusimba Hardware ye € 35. Mariri, unogona kumhanyisa huwandu hwakawanda hweanoshanda masystem kana kugoverwa kwaungashande zvinoenderana nezvaunoda uye nekuita akawanda mapurojekiti nekutenda kune zvinowedzerwa pamusika uye ayo makumi mana maGPIO. Kana iwe uchida kuziva zvakadzama Hardware yayo nehunyanzvi hunhu ndeiyi:
Broadcom BCM2711 SoC, asi kunyangwe kazhinji machipisi aya achibatanidza iyo RAM, kunyangwe mune ino kesi haina kudaro. Izvo zvazvinosanganisira ndeye ine simba rakanyanya GPU inotsigira OpenGL ES 3.0, multimedia inotsigira H.265 ye4K 60 FPS, H.264 ye1080p60 uye 1080p30 fps. Iyo CPU ikozvino quad-core ARM Cortex-A72 uye 1.5 Ghz.
La RAM yakaiswa pane yakasarudzika chip, ine mukana wekusarudza pakati pe1, 2 uye 4GB. Kusiya iyo RAM kunze kuri nyore kugadzira iyo imwechete bhodhi uye chete kutsiva iyo RAM chip yekupa dzakasiyana dzinoverengeka.
Kana ari connectivity, yakagadziridzwa zvakare. Iyo ine USB-C yemagetsi, 2 micro HDMI madoko, 2 USB 2.0 madoko uye imwe 2 USB 3.0 madoko, kuwedzera kune iyo Ethernet neJack yekuteerera. Ehe, zvakare ine iyo micro SD kadhi kuverenga, GPIO, uye zvimwe zvinongedzo zvemagadgeti senge kamera module, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Raspberry Pi 4 Muenzaniso B: izvo zvitsva maficha
Ini ndaishandisa Raspbian paPi 3b, inova ndiyo nzira yakanyatsogadziriswa, uye yainonoka sekamba sezvo 1GB ye RAM yaive hombodo huru.
Nekusimuka kweRam iyo inoshanda chete se mini pc neLinux.
Iyo NSA ichashanda paCoreboot, iyo yakavhurwa sosi nzira kune BIOS uye UEFI